China TC316A-RGB Kupeta 2-Rongedza RGB Vhidhiyo Kamera Mwenje fekitori nevatengesi | TEYELEEC
Simbi RGB / Rakajeka Chiedza | TC316A-RGB
316pcs (140pcs RGB maLEM uye ma176pcs Warm neCold mwenje mwenje)
Vaka-muLi-polymer 7.4V 3200mAh
USB-C 5V 9V Kubhadharisa nekukurumidza
TC136A-RGB Kupeta 2-Pack RGB Vhidhiyo Kamera Mwenje, Yakapetwa-Yakatenderera Swivel LED Vhidhiyo Photography Mwenje 2600-12000K Mwenje Panera, Yakavakirwa-mukati Inotakurika Bhatiri 360 ° Yakazara Ruvara 12 Chiedza Mhedzisiro.
Pashure: TA184 Yakaonda Rectangle Shape Photo Chiedza
Zvadaro: TL40 Nhare mbozha LED Zadza Chiedza
Ichi chizvarwa chitsva chese-aluminium muviri akapeta-anokwanisa RGB kutora mifananidzo mwenje neakajeka uye compact dhizaini uye nyore kushanda. Iine mavara e360 uye zana-danho rekuzadza kugadziridzwa uye maviri-eruvara tembiricha mwenje marozari, iyo yakapetwa-inokwanisa RGB kutora mifananidzo mwenje inopa akasiyana mavara uye zviitiko. Iyi LED Photography Mwenje inoshanda yepamusoro-soro, yakakwirira-lumen, yakakwira-inoratidzira mwenje yemwenje ye LED kuita yakapfava uye kunyange mwenje uye yakawanda yakajeka mavara. Zvakare, ichi mwenje chinopa gumi nemaviri kazhinji mwenje mhedzisiro mamiriro emamiriro ekuteedzera. Iine yakavakirwa-yakakwira-inokwana uye lithiamu bhatiri inovimbisa iyo yakareba bhatiri hupenyu. Yakashongedzerwa neshangu inopisa yeshangu, mwenje unogona kugadziriswa munzira dzakawanda uye mumakona. Iyo muti-inoshanda, yakawanda-chinangwa kutora mifananidzo mwenje ndiyo inofanirwa kupfura zvishandiso zvepamoyo podcast, vhidhiyo, bvunzurudzo, mifananidzo, michato, macros, zvisikwa.
• [2 Pack Vhidhiyo Yemafoto Mwenje] Yakasarudzika Dhizaini, Dual LED Vhidhiyo Mwenje yakabatana ne hinge, ese ari maviri anogona kupetwa uye kutenderera kune akawanda-direction.Tatu 1/4 ″ sikuruu maburi mumuviri, imwe inotonhora shangu nati, imwe imwe inopisa shangu adapta ine inogadziriswa bhora musoro, inokutendera iwe kumisikidza uye kusangana ako akasiyana vhidhiyo / kutora mafoto zvinoda.
• [36000 Colors 0-360 ° Ruvara Kombi Inofuridzira kugona] High lumen 2960Lux @ 0.5m, Hue inogadziriswa kubva pa0 degree -360 degree; Ruvara Saturation inogadziriswa kubva ku0-100, CRI-97, TLCI-96 Kupenya kubva ku0% -100 % kudzima; Ruvara tembiricha kubva 2600K (inodziya) kusvika 12000K (inotonhora). OLED inoratidzira inopa kuverenga kwakaringana uye nyore kushanda nemabhatani / mapfundo.
• [Tsigira Mwenje miviri Inoshanda Panguva imwe chete] Yakavakirwa-mukati 7.4V 3200mAh bhatiri recharge, USB Type-C yekuchaja chiteshi, inogona kubhadhariswa zvizere mumaawa matatu ne9V, inotsigira izere simba 165 maminetsi anoshanda neA kana B pani pa100% chete. kupenya, 105 maminetsi ekushanda nguva aine ese A uye B mapaneru mwenje, ichave yakareba nekudzika kupenya.
• [Chigadzirwa Zvimiro] Inotorera-maviri-tembiricha tembiricha mwenje mabhesi 316pcs, mhando yepamusoro uye yakakwira tsananguro.Two mapaneru mavhidhiyo mavhenekeri pamwechete ichiri compact uye isina huremu, chete 13.05oz maviri, 4.92inch * 2.83inch * 1.22inch (saizi) yakakodzera yekutakura kunyangwe muhomwe, inokodzera kutorwa mifananidzo kwezuva nezuva, kutepfenyurwa kwevhidhiyo, Youtube, kutenderera kurarama, nezvimwewo. Inogona zvakare kumira yega, izvo zvakanaka kune mwenje wedesktop.
Akatungamirira: 316pcs (140pcs RGB LEDs uye 176pcs Warm uye Cold mwenje LEDs)
Max Kujekesa: 2960 LUX (0.5M)
Bhatiri: Vaka-muLi-polymer 7.4V 3200mAh
Max Simba: 20W
Ruvara Kupisa: 2600K-12000K (± 250K)
Kupa Ruvara: CRI> 97
Kushanda nguva: Yakatenderedza 105 maminetsi ane maviri mwenje mapaneru; Maminitsi zana nemakumi mapaneru (nguva yekushanda inogona kureba kupfuura 105/165 maminetsi apo kupenya kuri pasi pe100%）
Kubhadharisa: USB-C 5V 9V Kubhadharisa nekukurumidza
Yekuchaja Nguva: 180 maminetsi
Chiedza Range: 0% -100%
Kushanda Kushanda: -10-35 ° C
Kuchengetedza tembiricha: -10-60 ° C
Swivel: Multi-angle kune ese ari maviri kana akapeta-anokwanisa
Kurema kweNet: 370g (0.82lb)
Kukura: 125.6 * 80.7 * 31mm (4.92inch * 2.83inch * 1.22inch)